Imisebenzi yoNyango lokuSetyenziswa gwenxa kweziyobisi - Ukusetyenziswa Kweziyobisi Ukuchacha
Ukwaluphala Nje Imiba
Ubuchule Ne Technology
Zokulala Imiboniso Yesilayidi
Imisebenzi yoNyango lokuSetyenziswa gwenxa kweziyobisi
Imisebenzi yeqela yenza isithuba sabantu ukuba bazihlolisise kunye naboUkusetyenziswa kweziyobisikwindawo ekhuselekileyo. Abathathi-nxaxheba, le misebenzi inokubonisa ukubonwa okutsha kunye namava anentsingiselo.
Injongo yeMisebenzi yoNyango yamaQela
Ukwenza ikheswa, ukufihla, kunye iintloni zihlala ziyimixholo ephambili yabantu abasebenzisa iziyobisi. Imisebenzi kuseto lonyango lweqela inika abathathi-nxaxheba ithuba lokunxibelelana nabanye abanokuthi bakuqonde ngcono oko bahlangabezana nako ngelixa bekwakhuthaza amalungu eqela ukuba axhasane. Abantu abanoloyiko malunga nonyango bafumana incasa yendlela esebenza ngayo, nento abonwabileyo ngayo, kwaye bakulungele kangakanani ukuqhubekeka namava abo.
Ithetha ukuthini xa ikhandlela livutha ngokukhawuleza
Imisebenzi yeQela loNyango lwaBantu abaDala
Ukuchaza ukuba ukusela kwakho nini na sele kwaba butywala
Unyango ngokuXoka okunyanzelekileyo
Umsebenzi # 1: Ukuqonda iNdima yakho
Lo msebenzi unceda abantu ukuba bandise ukuqonda kwabo usapho lwemvelaphi indima kwaye iguqulele njani ebudaleni. Kubantu abaninzi abasebenzisa iziyobisi, indima yabo kusapho yayinjengaleyo Isigulana esichongiweyo IP (IP). Njengomntu omdala, oku kunokuguqula umntu abe nexesha elinzima lokuzinakekela kwaye afune amaqabane angenampilo alingisa iindima zosapho lobuntwana, ezinje ngomama okanye utata wabo.
Veki nganye, yiba nomntu omnye okanye ababini babelane ngendima yabo yosapho, ngenxa yoko kukho ixesha elininzi lokuba iqela liyicubungule. Yenza ukuba umntu owabelana naye akhethe amavolontiya azodlala amalungu osapho lwabo. Umntu uya kuthi ngokufuziselayo abeke imizimba yamavolontiya ngendlela emele indlela abazibona ngayo kusapho ngokusebenzisa ilensi yokusebenzisa kwabo iziyobisi, kunye nokuba bajonga njani usapho lwabo. Ukuba ixesha liyavuma, yiba nendawo yomntu ngokwakhe (edlalwa livolontiya) kunye nelinye ivolontiya kubume bobudlelwane babo bokugqibela. Yenza iinkqubo ngokuxoxa:
Imibuzo eprintiweyo ephenduliweyo kunye neempendulo kukhetho oluninzi
Basondele kangakanani abantu omnye komnye kwaye ngoba
Inkangeleko yobuso 'yelungu' ngalinye libonisa
Umahluko kunye nokufana phakathi kokumelwa ngakunye- indlela abazijonga ngayo, indlela abazijonga ngayo iintsapho zabo, kunye nendlela ubudlelwane babo bothando obujongeka ngayo
Umsebenzi # 2: Ukufumana uMhlaba oFanayo
Elinye lawona macandelo acelomngeni ekujonganeni nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kukuziva ngathi kukho ukungabikho kokuqonda kunye nenkxaso. Ukwenza umoya oxhasayo, obandakanyayo, zama ukudibanisa amalungu eqela kwindawo efanayo. Oku kukhuthaza amazinga aphezulu okuvula, kunye nokugcinwa kweqela, okukhuthaza ukunyanga.
Uwucwangcisa njani umsebenzi
Qalisa umsebenzi ngokudlulisa ipeni kunye nephepha kuye wonke umntu. Nika wonke umntu imizuzu eli-15 ukuba abhale olona loyiko lwabo lukhulu xa kuziwa kunyango lokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi, into abanethemba lokuyifumana kunyango, oko bakucingayo ngobomi babo njengonyango sele luphelile, kwaye zibabonelela ngantoni iziyobisi abangazifumaniyo kwenye indawo kwaye banokuzifumana phi ezi mfuno ngendlela efanelekileyo?
Emva kokuqokelela iphepha lomntu wonke, bahlaziye kwaye bagqithisele wonke umntu iphepha. Nika wonke umntu imizuzu embalwa yokufunda iimpendulo ezingaziwayo. Yiya kwisangqa uze ubuze:
izinto ezintle onokuzithetha kudade wakho
Kukuphi ukufana onakho nalo mntu?
Ngaba ninokwesaba okanye iinjongo ezifanayo?
Ngaba unayo ingcebiso xa kuziwa ekufumaneni iimfuno zalo mntu ngendlela esempilweni?
Umsebenzi # 3: Ukuzikhathalela
Ukukhuthaza ukuzikhathalela yenye yezona zinto zibalulekileyo kunyango lweziyobisi. Ngaphandle kokuba nezakhono zokulwa impilo ukubuyela umva ngexesha loxinzelelo, ithuba lokuphinda ubuye lonyuke ngokubonakalayo. Ingxaki enkulu uninzi lwabo bajongana namava okusetyenziswa gwenxa kweziyobisi ayisiyo tune okanye inxulumene nemizimba yabo. Oku kunokukhokelela ekungaqondeni ukuba njaniixhala, okanye ukhathazeke kangakanani okanyeenomsindobaziva bade bafike kwi-10. Ngokungenelela xa baphantsi kumgangatho wokuqina, banokuzinceda ukubuyelaimeko yokuzolangaphambi kokuba uzive ukhululekile.
Ukulungiselela uBodwa kunye neQela lokuziKhathalela
Yazisa wonke umntu veki nganye omnye wabo uya kukhetha kwaye asebenze ngokuzilolonga ukusuka kwimizuzu embalwa ukuya kuthi ga kwimizuzu eli-10 ekuqaleni kwonyango lweqela. Ukuvumela amalungu eqela ukuba atshintshane ngokuqhuba umthambo kuyabakhuthaza ukuba bathathe inyathelo lokuqala kwaye bafumane umsebenzi wokuzinakekela othetha nabo. Ikwakhuthaza izakhono zobunkokeli kwaye inyuse ukuzithemba njengoko ilungu ngalinye leqela linceda ekuqhubeni umthambo. Sebenzisa umzekelo wokuzikhathalela okufanelekileyo ngoku:
Ukukhuthaza wonke umntu ukuba ahlale kamnandi kwaye aphefumle kancinci kwimizuzwana emihlanu, ebambe isihlanu kunye nokukhulula - yenza oku kwimijikelo emihlanu.
Inkqubo njengeqela apho wonke umntu esiva ukungavisisani emzimbeni wabo, apho baziva bekhululwa, kwaye kuthathe ixesha elingakanani kubo ukuba bazive bengatshintshi.
Xoxa ngezinto abazithandayo nabangazithandiyo malunga nomthambo nokuba kutheni.
Xoxa ngazo naziphi na iingxaki ezikhoyo ngexesha lomsebenzi.
Ukubaluleka kweMisebenzi yeQela
Imisebenzi yonyango yeqelakwabo bajongeneukuhlukunyezwa kwesiyobisiunokwenza imeko eyahlukileyo ekhuthaza ukuqonda, ukunxibelelana nabanye, kunye nezakhono zokusombulula iingxaki. Sebenzisa imisebenzi eyahlukeneyo yeqela kunokuba longezo olukhulu nakweyiphi naIsicwangciso sonyango lweziyobisi.
Izixhobo Zeski Izixhobo Amaqela Amaqela Umdaniso Umyalelo Ukuziphatha Komntwana, Uphuculo & Ubuzali Intente Camping Tips
Ubunzima Ubunzima Ukuzivocavoca
Umsebenzi Unxulumene Uxinzelelo
unxiba njani amakhonkco omtshato
ucaphula malunga nokuba ngumama kunyana
indlela yokutsala umfazi wegemini
ungakanani ubudala onokufumana itattoo
ubudala obunjani obuthathwa njengomntu omdala
oza kuqala emtshatweni
zeziphi ezona zinto zibangela ubushushu behlabathi
Do It Wena Plumbing